Elton John သက်တမ်းကြာဖက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် - သတင်း Rule
Elton John သက်တမ်းကြာဖက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်
Pop ဂီတသင်္ကေတကို Elton John သူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ထုံးချည်နှောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် ဒါဝိဒ်သည်ပရိဘောဂ ယခုသူ၏ဇာတိဗြိတိန်နိုင်ငံကလိင်တူချင်းလက်ထပ်တရားဝင်ပြီ.
အဆိုပါထိပ်တန်းအရောင်းရဆုံးပန်းချီဆရာအား NBC ရဲ့သို့ပြောသည် “ယနေ့တွင်” ပြပွဲက “ကျွန်တော်တို့ကအရမ်းတိတ်တဆိတ်ပြုပါလိမ့်မယ်။”
“သို့သျောကြှနျုပျတို့ပွုပါမညျကရွှင်လန်းသောအခါသမယဖြစ်လိမ့်မည်,” ယောဟနျသ ADDED.
စုံတွဲ, အဘယ်သူသည်အတူတူကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်, တစ်ဦးထဲသို့ ဝင်. လူထုအခြေပြုမိတ်ဖက် တွင် 2005.
“ဒီဥပဒေကတဆင့်လာရန်အဘို့အရွှင်လန်းဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်ပွဲတော်ကိုသင့်တယ်. ကျနော်တို့မပြောသင့်ပါ, '' အိုး, ကောင်းစွာကျွန်တော်တစ်ဦးလူထုအခြေပြုမိတ်ဖက်များ. ငါတို့လက်ထပ်ရဖို့နှောငျ့ယှကျဖို့မသွားပါတယ်။’ ငါတို့လက်ထပ်ရလိမ့်မည်။”
ပရိဘောဂအသို့ပြောသည် Las Vegas တွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း-ဂျာနယ် ရငျးနှီးသညျ့အခမ်းအနားကိုမေလထဲမှာရာအရပျယူမယ်လို့သီးခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း.
“အဘယ်သို့ငါကြှနျုပျတို့ပွုပါလိမ့်မယ်, မေလအတွက်အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ registry ကိုရုံးကိုသွားဖြစ်ပါတယ်ထင်, ငါတို့ကိုအတူယောက်ျားလေးများယူ, မျက်မြင်သက်သေများနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲ,” ထုတ်ဝေဟုသူ့ကိုကိုးကား.
ဤဆောင်ပါး, Elton John သက်တမ်းကြာဖက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
20638	0 Elton John, အိမ်ထောင်ရေး
← 3000 တစ်နှစ်တာအဟောငျးလေ့လာကြရအောင်ကင်ဆာနှင့်အတူစကားဝှ Found Google ကတူရကီပိုင် Web ဒိုမိန်းကြားဖြတ်ကပြောပါတယ် →